ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ အိမ်ကလေး တစ်အိမ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ အိမ်ကလေး တစ်အိမ်
ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ အိမ်ကလေး တစ်အိမ်
Posted by Diamond Key on Oct 8, 2011 in Creative Writing, Short Story | 18 comments
ကျွန်တော် ပိုင်တဲ့ အိမ်
အိမ် ဆိုတာက နားခိုစရာ အေးချမ်းနွေးထွေးမှု ကိုပေးတယ် ..………..၊
လုံခြုံမှု ကို ကိုပေးတယ် ..……………………………………….…..……..၊
စားစရာတွေ ရှိတယ် …………………………………………….…………..၊
ဒီဇိုင်း အမျိုးမျိူးနဲ့ ဆောက်ကြတယ် ………………………….……………၊
ဒီ အိမ်လေးတွေ ကို ကျွန်တော် ချစ်တယ် ………………………………..၊
အိမ်လေးတွေ ကို ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ချစ်တယ်၊ နှစ်သက်တယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း တိတိကျကျ ပြောလိုမရပေမဲ့ ငယ်ဘဝ ကစတာဖြစ်မယ်။
မိဘ ဝန်ထမ်းဘဝနဲ့ နေရာဒေသ၊ အိမ်တစ်အိမ် မှာ ၂နှစ်၊ ၃နှစ် လောက်သာ အမြဲနေခဲ့ရပြီး မိဘပြောင်းတိုင်း မြို့ပြောင်း၊အိမ်ပြောင်း အမြဲပြောင်းပြောင်း နေရတော့ အိမ်သစ်၊ နေရာသစ်ကိုရောက်တိုင်း ရောက်တိုင်း နေရာဟောင်းက ကိုယ်နေခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်လေးတွေကို လွမ်းတာကနေ စတာဖြစ်မယ် ထင်တာပဲလေ။
အိမ်လေးတွေကို မြင်ရင်ချစ်တယ်၊ နှစ်သက်တယ်။ အဲဒီထဲမှာမှ ရှုခင်းတောတောင် စိမ့်စမ်းလေးနဲ့ စိမ်းစိမ်းစိုစို သာသာယာယာလေးတွေ ဆိုရင်တော့ အနှစ်သက် ဆုံးပေါ့။
ဒီလိုအိမ်လေးတွေ တွေ့ရင် ပိုင်ချင်တယ်။ ကိုယ့်ဆန္ဒအတိုင်းဆိုရရင်တော့ တိုက်ကြီးတာကြီးတွေ မနှစ်သက်ဖူး။ မမက်မောဘူး။ ကွန်ကရစ်တောကို မချစ်ပါဘူး။
ခေါ်ဈေးက ၂,၀၀၀ တောင်အော်ပါတယ်။ ရောင်းတဲ့ မူလ အိမ်ပိုင်ရှင်ကို ဈေးဆစ်တာ ၁၈၀၀ နဲ့ အရောင်းအဝယ်တည့်ပါတယ်။
ကျွန်တော်က ကွန်ကရစ် တိုက်တာဘလောက်တွေ ကြားမှာ မလွဲသာလို့နေရခဲ့ရတာတွေ ရှိခဲ့ပေမဲ့ စမ်းချောင်းလေးတွေ၊ ရေမြေတောတောင် ရှုခင်း အလှ၊ ရေပြင်ကျယ်ကြီးတွေ နားက အိမ်လေးတွေကိုနှစ်သက်တယ်။
ရေသံလေးတွေ ၊ကျေးငှက် သာတကာလေးတွေရဲ့ အော်သံ တွေကိုမက်မောတယ်။
တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ချစ်တယ်။ မနက်အိပ်ရာက ထတာနဲ့ တီတီတာတာ အသံလေးတွေ ကြားနေချင်တယ်။ ရေစီးသံ၊ ရေကျသံလေးတွေကို နှစ်သက်တယ်။
ဒါကြောင့် တစ်ခါတရံမှာ ကိုယ်စိတ်ပင်ပန်းလာရင် ဒီလိုနေရာမျိုးလေးတွေ ဆီသွားပြီး အပန်းဖြေလိုက်ရရင် စိတ်ချမ်းသာတယ်။
မနက်အိပ်ရာက အထ၊ ဘဝရဲ့ တစ်မနက်ကို အစမှာ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့၊ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတဲ့ စိမ်းစိုတဲ့ ရှုခင်း၊ တီတီတာတာ ၊ကျေးငှက် သာတကာလေးတွေရဲ့ အသံသာလေးတွေ ကြားလိုတယ်။
ဒါပေမဲ့ မချမ်းသာတဲ့ ဘဝမှာ ရှိတာလေးနဲ့ လှအောင်ဝတ်၊ ရတာလေးနဲ့ ဝအောင်စားနေရတာ ဆိုတော့ အထက်မှာ ကိုယ်မျော်လင့် သလို အရာရာ ကတော့ တမဟုတ်မှာ ဘက်စုံ ဘယ်ပြည့်စုံ နိုင်မှာလဲလေ။
အိမ်လေးတွေ ကိုချစ်တဲ့ကျွန်တော်၊ ကျေးငှက် သာတကာလေးတွေရဲ့ အသံသာလေးတွေ ကြားလိုတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ အာသာပြေပေါ့။
အခုဆိုရင် မနက်မနက် ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ အိမ်လေးမှာ ချစ်စရာ ကျေးငှက်လေးတွေ၊ သူတို့ရဲ့ အသံလေးတွေနဲ့ ထုံမွန်းနေပါတယ်။
သူတို့လေးတွေ စားဖို့ လုပ်ပေးရတဲ့ ကျွန်တော့် အတွက်လည်း အဟာရ ကုသိုလ်တွေ နေတိုင်းရနေပါတယ်။
ကျွန်တော်အိမ်လေးကို သူတို့လေးတွေ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ နေတိုင်းလာကြပါတယ်။
ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ အသံသာလေးတွေလည်း နေတိုင်းကြားနေရပါပြီ။
ကျွန်တော်ပိုင်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိမ်လေး …………………………………………………….……………… ၊ ငှက်အိမ်လေးပါ။
ကျွန်တော် အိမ်ကလေးဆီ လာတဲ့ ဧည့်သည်တွေ
အလကားနေရင်း စာကလေးအိမ် ၀ယ်ချိတ်ချင်တဲ့ စိတ်ကဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူး
ကိုဝယ်ချိတ်ထားတဲ့အိမ်ထဲ ဒီငှက်လေးတွေ ၀င်ေ၇ာက်နေထိုင်တာကိုတွေ့ရင်
လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟတွေ မရှိတဲ့ အိမ်ကလေး
တူသော အကျိုးပေးမှာပါ ခင်ဗျာ ….
ကိုစိန်သော့ စာနဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ မြင်ရတော့
အော်ပီကျယ့် ကာတွန်းကို သတိရမိသဗျာ
အိမ်တွေ အထူးလျှော့ဈေး ဆိုတာလေ
နေ့ စဉ် ကုသိုလ်တွေ ရနေမှာပါ အသေအချာပဲဆိုတာ
အစပိုင်းမှာ အိမ်တလုံးပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ်ဖြစ်နေပြီး ၀ယ်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုတော့လူနေအိမ်လားပေါ့ ။
ဒါပေမယ့်နောက်မှ ငှက်အိမ်လေး ဖြစ်နေတာ သိရတယ်။ twist လေးနဲ့ေ၇းထားတာဆိုတော့ သိပ်ကောင်းပါတယ် ဖတ်လို့ ။
ငှက်ကလေးတွေကို ထားတဲ့ စေတနာကြောင့် တနေ့ မှာကိုယ်ပိုင်အိမ်လေးတလုံး ပိုင်ဆိုင်နိူင်မှာပါ။
ပေးတဲ့ ဆုနဲ့ အမြန်ပြည့်ဝရပါစေဗျာ။ ကျေးဇူးပါ။
စာကလေးအိမ် တလုံးလောက် ၀ယ်ချိတ်ချင်နေတာ အခု လက်ရှိ စိတ်ထဲ ဖြစ်မိနေတာ.. လူကြီးတွေက ပြောတယ် သစ်ပင်မှာ စာကလေးတွေ အများကြီးနေတာ တအိမ်လောက် ချိတ်ပေးတာနဲ့ သူတို့ ရန်ဖြစ်အောင် လုပ်သလို ဖြစ်မယ်တဲ့.. ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ မသိတော့ဘူး။
စာကလေးတွေ ပျော်ရသလို ကိုစိန်သော့လည်း ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။
ဒီစာလေးဖတ်ပြီး ကိုယ်တောင် စာကလေးအိမ်လေးချိတ်ချင်လာပါတယ်။
ကိုစိန်သော့လိုချင်နေတဲ့ လူနေအိမ်လေး ပိုင်ဆိုင်ရမှာပါ..နေ့နေ့ညည ဒါကိုဘဲခေါင်းထဲစွဲထား..
ငါအိမ်တစ်လုံးပိုင်ကို ပိုင်ရမည် လို့ဒိုင်ရာရ်ီမှာရေးထားလိုက်ပေတော့ဗျို့..ဒါတကယ့်အောင်နည်းဘဲ..
ကိုစိန်သော့ တော်တော် နောက်ပါလား။ အိမ်ဝယ်တယ်ဆိုလို့ လူ့နေအိမ်မှတ်လို့ စဉ်းစားနေတာ..။ူသူတ.ိုများတော်တော်ချမ်းသာပါလား…။၂၀၀၀ဆိုတော့ သိန်း၂၀၀၀ထင်လို့..။ မန်းတလေးဆိုတော့ လည်းအထင်ကြီးပြီးယုံလိုက်တာပေါ့။ ပြီးတော့မှ စာကလေးအိမ်ကိုး….။သတိတော့ထားနော်။ကြောင်တွေတက်တက်ခုတ်မယ်။ ဒင်းတို့ကဒါဘဲခြောင်းနေတာ…
ကျွန်ေတော်လာလည်လို့ မရဘူးလားဗျ.. ခင်ဗျားအိမ်လေးကို……..
Naywoonni ရေ၊ Welcome ပါ တောင်ပံပါရင် မင်းဆီမှာ……..။
ကိုပေါက်ရေ၊ Thanks. ပို့စ်တင်လိုက်ပြီးရင် ဘယ်လိုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာမသိလို့ ကူညီကြပါအုံး။
မီးတို့အိမ်မှာတော့ ပျံလွှားလေးတွေက ရွှံ့တွေနဲ့ အသိုက်လုပ်ပြီး လာနေတယ် … ညနေ ပျံလွှားလေးတွေ အိပ်တန်းတက်တဲ့အချိန်ဆို ဆူညံနေတာပဲ ….